Ronaldo Oo Cadho Darteed Ballan Qaaday In Aanu Warbaahinta La Hadli Doonin 3 Bilood
HomeWararka MaantaRonaldo Oo Cadho Darteed Ballan Qaaday In Aanu Warbaahinta La Hadli Doonin 3 Bilood
Cristiano Ronaldo waxa ayaa cadho uu ka qaaday qaab ciyaareedka liita ee isaga iyo kooxdiisa waxa uu ballan qaaday in aanu warbaahinta la hadli doonin inta ka hadlay xili-ciyaareedka, taas oo ka dhigan in aanu muddo ku dhow saddex bilood warbaahinta soo hor-fadhiisan doonin.
Cristiano Ronaldo ayaa xalay noqday ninka ugu goolasha badan tartamada Yurub oo dhan, kadib markii uu laba gool ka dhaliyey Schalke oo ku soo booqatay Santiago Bernabeu, hase yeeshee ceeb iyo madax foorar ay kooxda martida loo ahaa Boqortooyada Spain garoonka kaga baxeen.
Laacibka ay isku kooxda yihiin Cristiano Ronaldo ee Gareth Bale ayaa isna garoonka kaga baxay cadho iyadoo intii ay ciyaartu socotay ay taageereyaashu ku qaylinayeen.
Bale oo ay Manchester United dooneyso ayaa mar kale waxa uu dhibbane u noqday cayda taageereyaasha kooxdiisa, laakiinse kaldii ma ahayn ee waxa kale oo ay taageereyaashu ku qaylinayeen tababare Carlo Ancelotti iyo gool-haye Ikar Casillas.
“Mar kale hadli maayo illaa inta horyaalladu dhamaanayaan” sidaa waxa wariyeyaal u sheegay Cristiano Ronaldo.
Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu xalay dhaliyey goolkiisii 77aad iyo 78aad ee tartamada Yurub, waxaanu noqday ninka ugu goolasha badan isagoo dhaafay Raul Gonzales iyo Leonel Messi.
Sidan ayaa loogu kala horreeyaa gool dhalinta (Waxa ku jira EUFA iyo is-reeb-reebka Champions League)
Gool-dhalinta Champions League oo kaliya oo aanay ku jirin is-reeb-reebka Champions League
Enner Valencia oo raali gallin u diray dhakhaatiirta West Ham
Ciyaartooyada Chelsea Oo La Kala Dirayo Iyo Kooxda B-da Oo La ciyaarsiinayo
29/09/2015 Abdiwahab Ahmed
Oleksandr Usyk vs Mairis Briedis – Full Fight HD
27/01/2018 Abdiwahab Ahmed